Somaliland: Guddoomiyaha Cusub Ee Baanka Dhexe Oo Xilkii Si Rasmi ah Ula Wareegay - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Guddoomiyaha Cusub Ee Baanka Dhexe Oo Xilkii Si Rasmi ah Ula...
Guddoomiyaha cusub ee dhawaan loo magacaabay baanka dhexe ee Somalilnad, ayaa maalintii shalay si rasmi ah ula wareegay xilkii madaxweynaha Somaliland u igmaday.
Munaasibadda xil-wareejinta oo lagu qabtay Hutel Mansor ee magaalada Hargeysa, ayaa waxa kasoo qaybgalay, xildhibaanno, siyaasiyiin, madax-dhaqameed, dhammaanba baananka madaxa bannaan ee dalka ka jira, madaxa baanka dhexe, shaqaalahooda iyo weliba marti-sharaf kale oo aad u tiro badan.
Ugu horrayn waxa munaasibadda ka hadlay agaasimaha guud ee baanka dhexe Md. Cabdilaahi Xasan Aadan, waxana u ku dheeraaday marxaladihii kala duwanaa ee baanku soo maray iyo weliba sida uu mar walba ugu heegan yahay inuu muhiimad gaar ah siiyo horumarinta dhaqaalaha dalka.
Agaasime Cabdilaahi waxa hoosta ka xarriiqay in shaqadoodu salka ku hayso horumarinta dhaqaalaha dalka, isla-markaana ay ka caagan yihiin wixii siyaasad ah, “Baanka dhexe waa hay’ad maaliyadeed oo ka madhan siyaasad, waxana aanu taaganahay inaanu dhaqalaha dalka kor u qaadno, sida uu xeerka baanku dhigayona wixii kaleba waa naga mamnuuc, waxana aanu marwalba heegan ugu jirnaa sidii aanu dhaqalaha dalka u kobcin lahayn” ayuu yidhi agaasime Cabdilaahi Xasan Aadan.
Xubno ku hadlayey magaca baananka madaxa bannaan ee dalka oo iyaguna halkas ka hadlay, ayaa si weyn u ammaanay baanka dhexe, waxana ay sheegeen inay wada-shaqayn hufan leeyihiin, isla-markaana uu baanku si hufan uga caawiyo wax kasta oo wada-shaqayntooda la xidhiidha.
Saraakiil katirsan agaasinka sare ee Baanka oo uu kamid yahay Maxamed Shugri oo halkaas ka hadlay, ayaa xusay inuu Baanku heegan ugu jiro sidii uu xididdada ugu siibi lahaa sicir-bararka dalka ka jira, isla-markaana arrimaha taariikhiga ah ee uu ku tallaabsaday muddadii xukuumaddani xilka haysay ay ugu weyneyd beddelaadii lacagtii Giinbaarta ahayd oo muskilad weyn ku haysay dhaqaalah waddanka.
Guddoomiyihii hore ee baanka dhexe Md. Cabdilaahi Xaaji Jaamac Cali oo isaguna halkaas ka hadlay, ayaa xusay inuu wax badan kasoo qabtay baanka intii uu xilka hayey, waxana uu tilmaamay inuu dedaal ugu jirey sidii uu u hirgelin lahaa qorsheyaasha baanka u yaalla ee hore loo dejiyey.
Cabdilaahi Xaaji Jaamac waxa uu ka dalbaday shaqaalah baanka dhexe inay sidii hufnayd ee ay isaga ula shaqayn jireen ula shaqeeyaan, isla-markaana soo dhaweeyaan oo shaqada la qabtaan.
Guddoomiyaha cusub ee Baanka dhexe Md. Maxamed Cabdi Ibraahim oo isaguna goobta ka hadlay, ayaa hoosta ka xarriiqay inuu diyaar u yahay sii horumariinta barnaamijyadii u dejisnaa baanka, isla-markaana uu si hufan oo daacad ah shaqada u qaban doono.
Waxa uu u mahadnaqay guddoomiyihii hore oo uu xusay inuu wax badan soo qabtay, waxana uu ka codsaday gacan laga siiyo sii ambo-qaadka raadadkii uu ka tegay guddoomiyihii shaqada uga horreeyey.